गोपीको पुरस्कार पाए कविले - मनोरञ्जन - साप्ताहिक
गोपीको पुरस्कार पाए कविले
चलचित्र ‘गोपी’ युनिटले कविता लेखन प्रतियोगिताका विजेताहरुलाई पुरस्कृत गरेको छ । चलचित्रका निर्देशक दीपेन्द्र लामा र निर्माता मणिकर्ण केसीले काठमाडौं एक कार्यक्रम गर्दै विजेताहरुलाई नगद तथा प्रमाणपत्र वितरण गरेका हुन् ।
सहभागीले ‘गोपी’को ट्रेलर हेरेर स्वावलम्बन तथा स्वरोजगार विषयमा कविता सिर्जना गरेका थिए । प्रतियोगितामा क्षितिज समर्पणको कविता ‘अस्थिपञ्जर हुनु अघि’ले सर्वोत्कृष्ट हुँदै प्रथम पुरस्कार जितेको थियो । त्यस्तै निरज दाहालको ‘स्वावलम्बी झन्डा’ द्वितीय र सुमन थापा मगरको ‘फर्किउ तिमी’ कविताले तृतीय पुरस्कार जित्न सफल भएका थिए ।
प्रथम, द्वितीय र तृतीय भएका कविहरुले क्रमश: ३० हजार, २० हजार र १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन् । सबै कविताको मूल्यांकन कविद्वय उपेन्द्र सुब्बा र नवराज पराजुलीले गरेका हुन् ।
आयोजक आरोही इन्टरटेनमेन्टका अनुसार प्रतियोगिताका लागि २ सयभन्दा बढी कविता प्राप्त भएको थियो । ती कविताबाट निर्णायकले उत्कृष्ट १० छानेर प्रथम, द्वितीय र तृतीय विजेताको छनोट गरेका थिए ।
उत्कृष्ट १० परेका बाँकी सातवटा कवितालाई सान्त्वना पुरस्कार स्वरुप ५–५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । सान्त्वना पुरस्कार पाउन सफल कवितामा मदन पन्थीको ‘श्रमको शरम’, दीपक पाण्डेयको ‘सपनाको फाँटबारी’, रमा फुयालको ‘तिम्रो पर्खाइमा’, प्रकाश आचार्यको ‘संकल्प’, शुभचन्द्र राईको ‘समयको आह्वान’, निखिल पाण्डेको ‘आधुनिक मदन’ र नवराज अधिकारीको ‘गोपी बनुँ मै पनि’ रहेका छन् ।
किताब जात्रामा अमर न्यौपानेलाई बेस्ट सेलर पुरस्कार
रुइतलाई घिमिरे स्मृति पुरस्कार
किम्फमा पियानो टु झंस्करलाई दुई लाख पुरस्कार
पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार शताब्दी पुरुष जोशीलाई
‘आमा’ भर्सेज ‘सेन्टी भाइरस’ फाल्गुन ८, २०७६
आमासँग निःशुल्क, चलचित्र ‘आमा’ फाल्गुन ८, २०७६
१९ लाखमा बिक्री भयो ‘चपली हाईट ३’को अष्ट्रेलिया राइट्स फाल्गुन ६, २०७६
भ्यालेन्टाइन प्रस्तुतीको तयारीमा अनिल सिंह माघ २९, २०७६
टिप्पणी : किन असफल भयो सेल्फी किङ्ग ? माघ २८, २०७६
रिस्ताको बलिउड यात्रा माघ २८, २०७६
धेरै चलचित्र खेल्दा दयाहाङको घट्दो क्रेज ! माघ २३, २०७६
के घर के डेरामा दयाहाङ, विपिन र वर्षा माघ २१, २०७६
नीरफूलको पहिलो पोस्टर सार्वजनिक माघ २०, २०७६